Home Wararka Ciyaaraha Maanta Juventus oo xiiseyneysa saxiixa Xidiga Manchester United ee Juan Mata iyo Tartan...
Juventus ayaa lagu soo waramayaa inay xiiseyneyso saxiixa halyeeyga Manchester United Juan Mata.
Kooxda Serie A ka dhisan ayaa noqotay kuwa ku takhasusay saxiixa wakiilada xorta ah waxayna haatan qorsheynayaan u dhaqaaqista ciyaaryahanka khadka dhexe iyagoo loolan kala kulminkara Valencia.
Sida laga soo xigtay Calciomercato , Juventus ayaa raadin doonta saxiixa ciyaaryahanka reer Spain ka dib markii qandaraaskiisa haatan ee Manchester United uu dhacayo dhamaadka xilli ciyaareedkan.
Juan Mata ayaa lagu hungoobay inuu si joogta ah u ciyaaro intii uu ka hoos ciyaarayay Ole Gunnar Solskjaer laakiin wuxuu muujiyay inuu weli leeyahay tayo iyo aragti marka fursad la siiyo.
32 jirkaan ayaa u saxiixay Chelsea xagaagii 2011 lacag la rumeysan yahay inay aheyd 28 milyan oo ginni. Xilli ciyaareedkiisii ​​ugu horreeyay, wuxuu ka ciyaaray door muhiim ah Kooxda Blues maadaama ay ku guuleysteen UEFA Champions League iyo FA Cup. Sannadkii ku xigay, kooxda galbeedka London waxay ku guuleysatay UEFA Europa League.
Juan Mata bandhigyadiisii ​​cajiibka ahaa ayuu ku kasbaday abaalmarinta ciyaaryahanka sannadka ee Chelsea labadii sano ee ugu horreysay kooxda. Ka dib markii uu ka dhacay booskii uu ka hoos ciyaaray José Mourinho, waxaa laga iibiyay Manchester United lacag dhan .1 37.1 million bishii Janaayo 2014.
Previous articlehalyeeyga reer Brazil Ronaldo oo Sheegay Xidig ay Real Madrid ku Qaldaneyd iibintiisa
Next articleLautaro Martinez oo ku dhow inuu heshiis cusub u saxiixo Inter Milan?